ဆီဗီးလား ကြယ်ပွင့်ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေသေးတဲ့ ချဲလ်ဆီး အပေါ် မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ လီဘို့ဖ် - SPORTS MYANMAR
ဆီဗီးလား ကြယ်ပွင့်ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေသေးတဲ့ ချဲလ်ဆီး အပေါ် မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ လီဘို့ဖ်
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်းကပဲ အင်တာမီလန် အသင်းကနေ ဘယ်လ်ဂျီယမ် လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး ရိုမီလူ လူကာကူကို ကလပ် စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၉၇.၅သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ၊ နောက်ထပ် ပစ်မှတ် တခု အဖြစ် ဆီဗီးလား အသင်းရဲ့ ပြင်သစ် လူငယ် ခံစစ်မှူး ဂျူးလ်စ်ကွန်းဒေးကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ် ။
ကွန်းဒေး ဟာ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက် အတွင်း ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်တွေထဲက တခု ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၊ လူကာကူလောက် အဆောတလျင် မလိုအပ်တဲ့ ပစ်မှတ် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ချဲလ်ဆီး ဟာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ ကစားသမား တချို့ကို ရောင်းချပြီးစီးသွားမှသာ ၊ ကွန်းဒေးကို အပြီးသတ် ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အစောပိုင်းမှာ ချဲလ်ဆီး ဟာ ပေါင် ၂၅သန်း + ကတ်ဇူးမားနဲ့ စတင် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် ၊ ဆီဗီးလားဖက်က ငွေသား ပေးချေမှုသာ အလိုရှိခဲ့သလို ၊ ဇူးမားဟာလည်း ဆီဗီးလားသို့ မပြောင်းရွှေ့လိုကြောင်း ငြင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ အထမြောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ အကယ်ဒမီထွက်ကနေ လူငယ် ခံစစ်မှူး ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ကို အသင့် အသုံးပြုလို့ ရနိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး ၊ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေနဲ့ ပေးဆပ်နေတယ် ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ် အသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲက ခြေစွမ်းတွေက သက်သေထူနေပါတယ် ။
လက်ရှိ ချဲလ်ဆီး အသင်းမှာ ချာလိုဘာ အပါအဝင် နောက်ထပ် စီနီယာ ခံစစ်မှူး ၄ဦး အပြင် ၊ အသင်းခေါင်းဆောင် ဆီဆာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ဟာလည်း ၃ယောက်တန်း ခံစစ်မှာ ကစားပေးနိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် ၊ ဗဟို ခံစစ်မှူးသစ် ထပ်ခေါ်ဖို့ ဆိုတာ ချဲလ်ဆီး အဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်နေပါဘူး ။
ချဲလ်ဆီး နောက်ခံလူဟောင်း ဖရန့် လီဘို့ဖ် ကတော့ ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆီဗီးလား ကြယ်ပွင့် ကွန်းဒေးကိုလည်း လက်မလွှတ်ချင်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ လုပ်ရပ် အပေါ် အခုလိုပဲ မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ESPN သတင်းဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ လီဘို့ဖ် က ” ထရက်ဗာ ချာလိုဘာ ဂိုးသွင်းသွားတာကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်တောင် မျက်ရည်ထွက်လုနီးနီး ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ လုံးဝ အံ့သြဖွယ် ကောင်းပါတယ် ။ သူဟာ စူပါဖလားမှာ ခြေစွမ်း အရမ်း ကောင်းခဲ့သလို ၊ ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်နဲ့ ပွဲမှာလည်း ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ဒီ ချာတိတ်ကို ကျွန်တော် အရမ်း နှစ်သက်မိပြီး ၊ ချဲလ်ဆီးဟာ နောက်ထပ် ခံစစ်မှူး တယောက် လိုသေးလို့လား ဆိုတာ ကျွန်တော် သံသယဝင်မိပါတယ် ။ သူတို့မှာ နောက်ခံလူ အများအပြား ရှိနေပြီး ၊ အခုဆို ချာလိုဘာ ဟာလည်း ဒီ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာပါပြီ ။ ”
” ဒီတော့ ကွန်းဒေးကို ထပ်လိုက်နေသေးတာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ ? သူဟာလည်း အံ့သြဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကစားသမား တယောက်ပါ ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားဟာ ကစားသမားတိုင်းကို တချိန်တည်းမှာ ပျော်ရွှင်အောင် ထားလို့ မရပါဘူး ။ ချာလိုဘာ ၊ ရူဒီဂါ ၊ ခရစ်တန်ဆန် ၊ ဇူးမား ၊ သီယာဂို … ဒီ ကစားသမားတွေ ရှိနေရင်တောင် အများစုက အရန်ခုံမှာ ထိုင်နေရသေးတာပဲ ။ ဒီတော့ နောက်ထပ် နောက်ခံလူသစ် ခေါ်ချင်တာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ ? ”
” ခင်ဗျားဟာ ရွေးချယ်မှုတွေ လုပ်ရပါမယ် ။ ခင်ဗျားမှာ နေရာ ၂နေရာ အတွက် ကစားသမား ၅ယောက် ၊ ၆ယောက် ရှိနေပါပြီ ။ ဒါဟာ လိုတာထက် ပိုနေပါပြီ ။ အကယ်၍ ချာလိုဘာ သာ လတ်တလော ခြေစွမ်းမျိုး ဆက်လက် ပြသနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ အနေနဲ့ ကွန်းဒေးကို မလိုအပ်တော့ပါဘူး ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။